Maxamed Cabdi Yusuf oo ka sheekeeyey qaabkii loo dilay Abtidoon iyo wixii dhacay (Dhageyso).!! | Caasimada Online
Home Warar Maxamed Cabdi Yusuf oo ka sheekeeyey qaabkii loo dilay Abtidoon iyo wixii...
Maxamed Cabdi Yusuf oo ka sheekeeyey qaabkii loo dilay Abtidoon iyo wixii dhacay (Dhageyso).!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ahaa dadkii ku jiray Hotelka Saxafi ee shalay weerarka culus lagu qaaday ayaa ka sheekeeyay wixii ka dhacay Hotelka markii la soo weeraray iyo qaabkii uu ku dhintay xildhibaan Cabdi Maxamed Abtidoon isagoo sheegay in xabad qolkii ay ku wada jireen dariishada uga soo gashay ayna wadnaha uga dhacday isla markiina uu naf baxay.
Xildhibaanka ayaa sheegay qaabka ciidamada dowladda ay gurmadka ugu sameeyeen markii hotelka la soo weeraray wuxuuna sheegay inay saluugsan yihiin waxqabadka dowladda arrimahan oo kale ayna jirto ciidamada khibrad la’aan loona baahan yahay in dowladdu wax ka qabato.
Xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu sheegay in laba xildhibaan oo ka mida Baarlamaanka Soomaaliya ay ku dhaawacmeen weerarka oo lugaha ay ka jabeen.